Miseve miseve: isu tinotsanangura kuti zvinorevei | Kunyora
Tattoos ane maumbirwo
MaTatoo eMaruva uye Zvirimwa
Zvinhu uye zvinhu nyora
Susana godoy | | Zvinhu uye zvinhu nyora
Haisi nguva yekutanga mu Kunyora isu tinotaura nezve iyo miseve nyora kana ye miseve uye uta uta. Icho mhando yetatoo, kunyanya iya yemiseve yega, iyo munguva dzichangopfuura yakave yakanyanya fashoni nekuda kwekureruka kwayo uye iyo inogona kuiswa tattoo mune yakapusa maitiro uye kuti, sezvandinowanzo taura, tinogona kuve tatoo. minimalist ine yakanaka, yakachena mutsetse.
Zvino, Wati wambofunga here kuti miseve nyora zvinorevei? Zvakanaka, zvarinoreva uye mucherechedzo wakanaka chaizvo uye wakadzama. Zvese zvinoenderana nerudzi rwe tattoo kuratidza imwe kana imwe meseji. Kubudikidza nemiseve nyora isu tinogona kuratidza hunhu hwedu, manzwiro, kuravira uye mazano. Miseve yezvakajairika dhizaini, ndiko kuti, inoenderana neiyo yaishandiswa munguva dzekare nevarwi, inosanganisirwa neiyo dziviriro.
Kune rimwe divi uye nekuchinja zvakanyanya chiratidzo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti miseve nyora iri dhizaini yakakodzera kune vakaroorana. Wakangwara uye wakanaka, iyo miseve nyora zvinoshandiswa zvakare ratidza rudo. Mune ino kesi, isu tinogona kutaura kuti ivo vaive vepedyo nehukama ne cupid nyora, hunhu hwerudo uyo akaitisa "vanyajambwa" vake kudanana neuta hwake nemiseve.
Zvichienderana nekugadzirwa kwetatoo, zvarinoreva zvinogona kusiyana. Uye ndizvozvo, semuenzaniso, miseve miviri yakayambuka zvinoreva hushamwari. Chimwe chezvinoreva izvo aya maatatoo uye izvo, mumaonero angu, ndeimwe yeakanyanya kunaka, ndeyekuti museve wakapfurwa unoratidza kuti hatigone kumira muhupenyu uye kuti tinofanira kugara tichifambira mberi.
Uye pakupedzisira, isu tine iyo zodiac chiratidzo, Sagittarius. Museve, pamwe neuta, ndechimwe chezviratidzo zvinoshandiswa kuimiririra mune nyora.
1 Zvinorevei tattoo yemuseve?
2 Zvinorevei miseve yakayambuka tattoo?
3 Mhando dzemiseve nyora
4 Mifananidzo yeArow Tattoos
Zvinorevei tattoo yemuseve?
Iyo museve tattoo ine zvakawanda zvinoreva. Kunyangwe, kutanga kwezvose, zvinofanirwa kutaurwa kuti ndicho chimwe chezviratidzo zvevaNative America. Pamusoro pekudzivirirwa, imwe yedzidziso huru yatinowana mairi kugona. Semitemo yakajairwa, miseve yakafanana necheni nedziviriro kana maitiro. Saka hazvishamise kuti zvadzinoreva zvinomiririra kutarisa kumberi. Zvimwechetezvo, zvainzi museve wakatarisa mudenga uye wakasungirirwa padenderedzwa, waive mucherechedzo wemunhu.
Imwe museve tattoo: Patinotora tattoo nemuseve mumwe, zvinomiririra zvambotaurwa. Kudzivirirwa pamwe nekudzivirirwa ndizvo zvichave zvako zvakakosha kukosha.
Miseve miviri yakatarisana: Zvakajairika kuona kuti miseve miviri inonongedzera munzira dzakatarisana sei. Zvakanaka, mune ino kesi tichaona kuti zvinomiririra kusawirirana, kukwikwidza kana hondo.
Museve Wakavhunika: Kana isu tichiona dhizaini yemuseve wakaputsika, zvino zvinomiririra kupera kwehondo, rugare. Iyo inzira yekureva kuti hatchet ichavigwa.
Miseve yakasiyanasiyana: Pane nyora ine miseve yakati wandei, saizi yakafanana uye yakaiswa padivi nepadivi. Kazhinji ivo vana kana vashanu. Zvakanaka, mune ino kesi tinogona kutaura kuti vanomiririra simba remuviri ratinahwo. Simba iro, richinge rakaumbwa nemiseve yakawanda kudaro, rinenge risingakwanise kukunda.
Zvinorevei miseve yakayambuka tattoo?
Iyo yakayambuka miseve tattoo ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzatinadzo. Pasina kupokana, kune akawanda magadzirirwo atinogona kunakidzwa nawo. Kunyangwe inonyanya kudiwa ndiyo iyo inoratidzwa mune yakapusa uye diki nzira. Hapana kumwe kuwedzera kuri kudikanwa. Chete miseve miviri inopindirana uye inotisiira zvinoreva hushamwari. Nenzira iyi, ndeimwe yeaya magadzirirwo anoitwa pakati peshamwari uye chisimbiso chakasimba hushamwari nekusingaperi.
Mhando dzemiseve nyora
Paruoko, iyo dzakamanikana uye dzakareba dhizaini ivo vanozove imwe yesarudzo dzakanakisa. Saka museve nyora dzinozove dzakakosha. Pano iwe unogona kusarudza chero maviri akayambuka miseve kana mubatanidzwa wemana kana mashanu ayo atakambotaura kare. Ndeupi waunofarira?.
Kune nzvimbo zhinji paruoko apo patinogona kuwana nyora dzemiseve. Kunyangwe mune ino kesi, zvidiki uye zvakapusa dhizaini zvakawandisa zvakanyanya. Kunyangwe zvakadaro, iwe unogona kunakidzwa navo zvese zviri zviviri pachiuno uye parutivi uye kunze kweruoko. Zvakare kumashure kana triceps yaro unogona kusarudza imwe yakati rebei dhizaini ine geometric kana minimalist hunhu.
ari nyora padivi ivo vanogara vari mhedzisiro yepamoyo wakanyanya. Neichi chikonzero uye nerunako rwemiseve, ivo vachatisiya isu kupfuura akakwana magadzirirwo. Iwe unogona kusarudza museve wakakombama kana wehunyambiri. Mazano ese ari maviri anowanzo kuve nyore mukupedzisa kwavo. Inki nhema uye kugona kwavo kunovaita imwe yemafungiro akakurumbira.
El pakati kumashure Iyi ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa kuti pfungwa dzako dzimhanye. Ikoko iwe unogona kugadzira yako yakanakisa dhizaini uko miseve ichave iri protagonists. Mune ino kesi, uye tikapihwa hupamhi hweganda, tinogona kugara tichisarudza dhizaini hombe. Mamwe acho anovhara kumusoro kwepamusoro.
Mifananidzo yeArow Tattoos
Matatoo neuta nemiseve: nhoroondo uye zvinoreva
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Zvinhu uye zvinhu nyora » Miseve nyora
Mamwe maTatoo ane hukama
Mavara pasi pechipfuva
Mavara evakadzi tsiva: kuunganidzwa kwemagadzirirwo uye mazano
Gamuchira iwo achangoburwa matatoo muemail yako.